Faah Faahin Qarax Ciidamada AMISOM Shalay Lagula Eegtay Magaalada Marko
Home Somali News East Africa Faah Faahin Qarax Ciidamada AMISOM Shalay Lagula Eegtay Magaalada Marko
Waxaa shalay qarax xoogan ciidamada AMISOM lagula eegtay Magaalada Marko ee xarunta Gobolka Shabeelaha Hoose, kaasoo dhaliyay khasaaro kala duwan.
Miinada oo ahayd nooca Rumuud Kontoroolka ee laga hago meelaha fog fog ayaa waxaa ciidamada AMISOM loogu aasay meel aan sidaasi uga fogeyn xarunta Jaamacada Harare ee Magaaladaasi Marko, waxaana miinadaasi lagu qarxiyay 3 gaari oo ay wateen ciidamada AMISOM.
Mid ka mid ah Gaadiidka AMISOM ayaa la sheegay in Miinada ay haleeshay, waxaana la soo wariyay in gaarigaasi gabi ahaanba uu bur buray, walow aan la ogeyn khasaaraha soo gaaray ciidamadi saarnaa.
Maamulka Magaalada Marko oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa u sheegay in qaraxa lala eegtay cidamada AMISOM, iyagoo ka gaabsaday khasaaro soo gaaray ciidamadaasi, sidoo kale maamulka Marko ayaa sheegay in howlgalo ay ka fuliyeen goobta uu qaraxa ka dhacay ay ku soo qab qabteen Rag iyo Haween ay sheegeen inay ku tuhmayaan Alshabaab.
Ila hada wax war ah lagama hayo Taliska Ciidamada AMISOM oo ku saabsan qaraxan lagula eegtay Magaalada Marko iyo hadii uu jiro khasaaro ka soo gaaray, walina ma jirto cid sheegatay inay ka dambeysay qaraxaasi.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada Soomaliya ayaa dhibaato ku qabo qaraxyada lala eegto xiliyada ay marayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan, waxaana ciidamada ay wajahayaan qaraxyo culus,iyagoo guulo ka gaaray dagaalka fool ka foolka ah.